आहा ! चितवनको मनमोहक गुलमोहर (फोटोफिचर) - Narayanionline.com
वसन्त ऋतु सकिएर ग्रिष्म ऋतु भर्खरै सुरु भएको छ । चैत र वैशाखलाई वसन्त ऋतुको रुपमा लिइन्छ । वसन्त ऋतुमा प्रकृतिको बहार नै आउँछ ।
वसन्त ऋतुमा अधिकांश बोटबिरुवाहरूको पूरानो पात झर्दछ र नयाँ पात पलाउँछ । यो ऋतुमा जतात्यतै हरियाली हुन्छ । वसन्त ऋतुमा प्रकृति निकै सुन्दर देखिन्छ । यो ऋतुमा विभिन्न प्रकारका फूलहरु पनि फुल्दछन् । फूलका बोटमा फूल र अन्य बिरुवाहरुमा नयाँ पालुवाले गर्दा प्रकृति निकै सुन्दर र मनमोहक देखिन्छ । वसन्त ऋतुमा फूलेका अधिकांश फूलहरु ग्रिष्म ऋतुसम्म पनि रहन्छन् भने नयाँ पलाएका अधिकांश बोटबिरुवाका पातहरु शिसिर ऋतुसम्मै रहन्छन् ।
वसन्त ऋतुमा मनै लोभ्यउने गरी फूल्ने एउटा फूल हो गुलमोहर । यो समयमा गुलमोहर फूलेर ढकमक्क हुन्छ । ग्रिष्म ऋतुसम्मै यो फूललाई देख्न सकिन्छ ।
गुलमोहरको वानस्पतिक नाम (Delonix regia) हो । गुलमोहरलाई अङ्ग्रेजीमा (Flame tree/Royal Poinciana) भनिन्छ । कृषि अध्ययनका अनुसार गुलमोहरको बोट फूलहरुको बोटमा सबैभन्दा ठूलो मानिन्छ । यसमो बोट गर्मी तथा न्यानो मौसम हुने सबै ठाउँमा हुर्कन्छ । यसको फूलमा वास्ना भने हुँदैन ।
यसको रुख करिब १५ मिटरका उचाईसम्म हुन्छ भने ५/८ मिटर चौडाइसम्ममा फैलिएर फूल्ने गर्दछ । यो फूलको आयु १५ देखि २० वर्ष हुने गर्दछ । गाढा रातो, पहेंलो र रातो पहेंलोको मिश्रणमा फूल्ने यो फूल नेपालमा भने गाढा रातो रंगको पाइन्छ ।
यो फूल चितवनमा पनि फूल्ने गर्दछ । सडक, घर, पार्क तथा नारायणगढको नारायणी किनारमा यो फूल देख्न सकिन्छ । आज हामीले नारायणगढको नारायणी किनार र कालिबहादुर गण सैनिक ब्यारेक, भरतपुर र विपि कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल आसपासमा रहेका गुलमोहर फूलको तस्विरलाई यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं ।
एक प्रतिक्रिया on “आहा ! चितवनको मनमोहक गुलमोहर (फोटोफिचर)”
Rudra poudel says:
खान योग्य छ छैन थाहा छैन तर मैले केटाकेटी बेलामा रुखमा चढेर घन्टौ खाईरहन्थे । ऐले पनि देखेपछी फूल नखाई रहन सक्दिन । हेर्दा मात्र हैन खान स्वादिलो लाग्छ मलाई यो फूल ।
नवलपुरका किसानलाई प्राङ्गारिक मल, किलोको पाँच रुपैयाँमा मल पाउँदा किसान हर्षित